Ogaden News Agency (ONA) – Dawlada Sacuudiga oo Hakisay Duulimadyadii Canada..
Dawlada Sacuudiga oo Hakisay Duulimadyadii Canada..
Posted by Wariye Qaran	/ August 8, 2018
Talabaadan ayaa u danbaysay xiisad diblumaasiyadeed oo maalmihii lasoo dhaafay circa isuku shareertay taas oo u dhaxaysa dawlada Canada iyo Boqortooyada Sacuudiga. Shirkada duulimaadyada ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay hakinayaan dhamaan duulimaadyada u kala goosha labada dal wixii ka bilaabma maalinta Isniinta ah.
Adel Al-Jubeir Wasiirka Arimaha Dibadda ee Sacuudiga ayaa horay dawlada Canada ugu eedeeyay in ay soo faragelisay arimaha gudaha ee Sacuudiga iyadoo adeegsanaysa dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka. Dawlada Sucuudiga ayaa eriday safiirkii Canada u fadhiyay Riyaad sidoo kalena waxay haksay barnaamijyo la xidhiidha waxbarashada oo labada dal ay kawada shaqayn jireen.
Chrystia Freelan Wasiirka Arimaha Dibadda ee Canada dhankiisa waxa uu sheegay in dawladiisu ay weligeed u taagnaan doonto difaacida dadka u dooda xaquuqda aadanaha iyo haweenka. Canada ayaa todobaadkii lasoo dhaafay walaac ka muujisay xarig ay boqortooyada Sacuudigu u gaysatay dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadana iyo haweenka oo ay ka mid tahay gabadha caanka ah ee Samar Badawi. Dawlada Canada ayaana ku baaqday in dib loo siiyo dadkaas xoriyadooda.